Par Taratra sur 12/06/2021
Mila miroso sy mandroso
Natao tamin’ny alalan’ny fifandraisana ampitain-davitra ny fifanatrehana mivantana teo amin’ny Antenimi­eram­pirenena sy ny governemanta. Nasian’ny praimi­nisitra teny ny fiatrehana ny valanaretina Covid-19, ny fitantanana, ny fandriampahalemana sy ny filaminana, ny toekarena sy ny fotodrafitrasam-pamokarana, ny lafiny sosialy…
Noho fiverenan’ny valanaretina, nofaritana ho +4,3% ny fiakaran’ny harinkarena faobe, raha -5% izany tamin’ny 2020. Hotanana 6,2% ny sondro-bidim-piainana. Raha 9,8% ny tahan’ny famorian-ketra tamin’ny taon-dasa, 11,4% ny tanjona amin’izao. -6,5% ny tsy fifandanjan’ny vola miditra sy ny vola mivoaka amin’ny tetibolam-panjakana.
Nambaran’ny filohan’ny Repoblika tamin’ny fampitaovana fanadiovana ny kaominina Ivato fa tsy sakana amin’ny fampandrosoana ny tsy fitovian’ny loko politika. Hatsangana eny an-toerana ny sekoly sy ny kianja manara-penitra, araka ny fangatahan’ny ben’ny Tanàna, voafidy tamin’ny anaran’ny Tim, ary hohavaozina ny lapan’ny Tanàna.
Hifarana anio ny fikaonandoha ho fisandratana ny faritra atsimo, tarihin’ny filohan’ny Repoblika. Lalan-tsaina entina amin’izany ny fametrahana tetikasa maharitra sy paikady lehibe hahitam-bokatra haingana sy azo tsapain-tanana. Tsy maintsy hirosoana ny fanajariana ny tany, ny fama­tsian-drano, ny famokarana, ny fanamboaran-dalana…
Amin’izany rehetra izany, tsy sakana ny hamehana ara-pahasalamana, ny hetraketraky ny natiora, ny tsy fitoviam-pijery… Mila miroso ny tsirairay? Na iza na iza, na aiza na aiza… Mila mandroso amin’izay ny firenena sy ny fiainam-bahoaka.